Izinhlobo ezi-5 zebuzi ezidume kakhulu nokuthi uzithola kanjani | Amadoda aSitayela
Iningi labesilisa lizama izinhlobo ezahlukahlukene zezimbuzi zize zize zithole elifanele kangcono. Njengakho konke okuphathelene nesitayela, Ukushaya inkunzi yeso yinto yokuzama nokwenza iphutha.
Izinqa zinikela ngomhlaba ophakathi nendawo phakathi kokucheba okuseduze nentshebe. Ziyisixazululo lapho ukhetha ukugqoka izinwele zobuso kepha azikho iziqu ezanele ezihlathini ukwakha intshebe egcwele. Bese kuba khona labo abakhetha yona ngoba bamane bayithanda kangcono ukuthi ibafanele kanjani.
1 Amasumpa ayingxenye
1.1 Iqhubu elincane
1.2 Isibumbu esikhulu
2 Qedela izinkinobho
2.1 I-knob yakudala
2.2 Imbuzi Van Dyke
2.3 Isibambo sehange
3 Uhlobo luni lwebhathini okufanele ulukhethe
4 Ungayigcina kanjani i-knob
Amasumpa ayingxenye yilawo angaqukethe amadevu. Izinwele zobuso zikhawulelwe endaweni yesilevu futhi zingakhiwa ngezindlela eziningana:
Ishefa konke ngaphandle kwezinwele ezisendebeni engezansi. Ubude bomugqa buncike ekuthandweni komuntu siqu. Ingahlala kusigaxa esincane esingunxande ngaphansi kwendebe noma iqhubeke ukwehlela phansi kwesilevu ngokuvundlile ngendlela othanda ngayo. Izinhlobo ezinde zaziwa nangokuthi ama-runway knobs.
Kumele unake kuphela ingxenye encane yezinwele zobuso, yingakho, kuzo zonke izinhlobo zezimbuzi, lokhu ngokwemvelo yilokho okudinga ukunakekelwa okuncane.
Eyaziwa nangokuthi i-knob yasekuqaleni. Kufana nembuzi egcwele, kepha ngaphandle kwamadevu. Izinwele zendawo yesilevu zivunyelwe ukuba zikhule ngokuphelele.
Ukufeza ukwakheka kwayo okuyisici ingxenye engenhla idinga ukufinyelela ekhoneni lezindebe. Kubalulekile futhi ukuthi uyihlukanise emaceleni ukuze ibe ububanzi obufanayo nomlomo ekukhulumeni okungathathi hlangothi.
Izinduku ezigcwele yilezo eziqukethe zombili amadevu kanye nembuzi.. Kunezinhlobo ezahlukahlukene kuye ngesimo sazo, nokuthi izingxenye zombili zixhumene yini noma cha. Zivame ukuthopha kakhudlwana kunezingxenye zezinkinobho.
Amadevu namabhokhwe ezimbuzi adinga ukuxhumeka kwakheka indingilizi enganqamuki noma isikwele esizungeze umlomo. Kuzo zonke izinhlobo ze-knob, lokhu kunjalo isitayela cishe wonke umuntu ucabanga ngaso lapho ekhuluma ngezinkinobho.
Njengabanye, imbuzi yakudala ingagqokwa ibe mfushane, iphakathi noma yinde. Cabanga ukuyinciphisa nokunqamula udebe olungezansi kwesilevu ngomphumela ochazwe kabanzi.
Imbuzi Van Dyke
Isitayela seVan Dyke siyefana nembuzi egcwele, ngomehluko lokho amadevu kanye nezimbuzi azixhunyiwe. Cabanga ngakho uma unenkinga yokuthola isiyingi esigcwele sezinwele noma uma ubukeka nje uthandwa kakhulu ngalesi sitayela.
Ukufeza ukuma kwaso okungunxantathu okuhlukile, imbuzi kufanele ibe yincane kunamadevu. Ezinguqulweni ezinde, umumo ofanayo kanxantathu ophendukezelwe utholakala ngokusika i-knob iphuzu ngosizo lwesikele.
Ngalesi sitayela, amadevu kanye nelezimbuzi nakho akunqanyuliwe, kepha, ngokungafani nalokho okwenzeka ngeVan Dyke, nakhu ububanzi bembuzi obufanele budlule obomlomo hhayi ngenye indlela. Ngale ndlela, umumo okhumbuza ihange udwetshiwe ngezinwele zobuso.
Yimbuzi evela ku-'Iron Man'. Umlingisi uRobert Downey Jr. uyisibindi salolu hlobo lwembuzikokubili ngaphambili nangemuva kwamakhamera.
Uhlobo luni lwebhathini okufanele ulukhethe
Isitayela esifaneleke kakhulu kulowo nalowo sincike ekubunjweni kobuso. Isibonelo, ubuso obuyindilinga buvame ukuzuza ezinkanjini ezinde, ezinamathele. Ngakolunye uhlangothi, uma unobuso obude, kuwumqondo omuhle ukucabanga ngokuvundlile. Uma lokho kunguhlobo lwakho lobuso, awugcini ubude bakho bezimbuzi, ubuso bakho bungabonakala buncane kakhulu
Kodwa-ke, ngenkathi kuyimihlahlandlela enhle yokuthola ama-bearings akho ekuqaleni, akwanele. Futhi ukuthi futhi kufanele ucabangele ama-engeli namajika omlomo, isilevu nomhlathi, okuhlukile kumuntu ngamunye. Futhi, kufanele uvumelane nohlobo lokukhula. Wonke amadoda awanazo izinwele zobuso ezisatshalaliswa ngendlela efanayo, futhi uma enza kanjalo, ahlala eba nobukhulu obuhlukile. Ngakho-ke, nguwe kuphela onganquma ukuthi yimaphi ama knob angenhla alungile.
Ungayigcina kanjani i-knob
Kuphakathi kokugunda intshebe noma ngesikele, izinkinobho kufanele zigundiwe njalo. Ngaphandle kwalokho, imbuzi engenasici ingashintsha ngokushesha ibe yinto ephazamisekile futhi engathandeki.
Noma kunjalo amadevu namabhokhwe ezimbuzi ngokuvamile ashiywe ngobude obulinganayo, akuyona imfuneko ebalulekile. Ingxenye eyodwa ingashiywa yinde kancane kunenye ukufeza ukwakheka okuthopha kakhulu ebusweni bakho.
Ukugcina ukwakheka kwayo kubalulekile njengokuyisika. Ukuyinqamula ngendlela ekhethiwe, udinga insingo. Izisiki zikagesi nezinsingo kungenza nomsebenzi wenziwe. Lapho isitayela esikhethiwe sesidwetshiwe, kulula kakhulu ukusigcina.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izinhlobo ze-knob
Ukuzivocavoca kwe-band elastic